टिकापुर पार्क पर्यटनको गन्तब्य – केबी मसाल
टिकापुर पार्क पर्यटनको गन्तब्य
October 30, 2017 KB Mashal0Comment
नेपालमा आजभोली पर्यटक भएर घुमघाम गर्ने संस्कारको विकास भएको छ । फुर्सदको समयमा आफ्नो देशका बिभिन्न पर्यटकियस्थलको अध्यन,अवलोकन गर्ने सस्कारलाई राम्रो मान्नु पर्दछ । तर धेरै पर्यटकहरु आफु घुमघाम गर्ने ठाउँको बारेमा सबै अध्यन नहुदा समय, पैसा र यात्रामा दुख पाउने गरेका छन । अहिले नेपालमा धेरै ठाउहरुमा सडक यातायात सञ्चालन भएका छन । यातायातको रुड मात्र थाहा हुन सक्यो भने पनि कम समयमा पर्यटकहरुले धेरै ठाउको भ्रमण गर्न सक्दछन ।
अहिले नेपालको प्रदेश नम्वर ७ मा पर्ने कैलाली जिल्लामा धेरै ठाउमा पर्यटकको लागी घुमफिर गर्ने स्थलहरु भएका छन । कैलाली जिल्ला नेपालको पश्चिम तराईमा पर्दछ । इतिहास हेर्ने हो भने वि.स. १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोेहको समस्या समाधान गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणाले इष्ट इण्डिया कम्पनिलाई सहयोग गरेवापत वि.स. १८७३ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भू–भाग मध्य पुरस्कार स्वरुप वि.स.१९१७ मा बाके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता आएकोले कैलालीलाई नयाँ मुलुकको रुपमा पनि चिनिन्छ ।
कैलालीमा पर्यटकहरुलाई लोभ्याउने खालका मुख्य पर्यटकियस्थलहरु मा टिकापुरको पार्क, घोडाघोडी ताल र कर्णाली चिसापानीको पुल पर्दछन । यी सबै ठाउ पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने स्थल हुन । जुन कारणले गर्दा आजभोली कैलाली जिल्लामा स्वदेशि मात्र होइन विदेशि पर्यटकहरु पनि भ्रमणमा पुग्ने गर्दछन । कर्णाली पुल केहि बर्ष अगाडी सम्म प्रदेश नम्वर ७ को प्रवेशद्वार मानिने गर्दथियो । यो पुल आज भन्दा २४ बर्ष अगाडी निर्माण भएको हो । यो पुललाई तार पुल पनि भनिन्छ । पुलको बिचमा एउटा खम्बा र त्यसमा स्टीलका तारहरुले बाधेर ट्रसलाई अडयाईएको छ । यो पुल ५सय मिटर लम्वाई १० मिटर चौडाई रहेको छ । बिचको खम्बाबाट एक भाग तिर ३२५ मिटर र अर्को भाग तिर १७५ मिटर स्टिल तारको लट्ठाबाट पुल निर्माण भएको छ । यो पुलको निर्माणमा ३ हजार ८७० टन स्टील प्रयोग गरिएको छ ।
कर्णाली नदि पुलको भाग सकिना साथ दुई भागमा बिभाजन भएर बग्दछ । स्थानीय बोलीचालीमा यसरी छुट्टीएर बनेको पानीको भागलाई पश्चिम तिरको पानीलाई कर्णाली र पूर्व तिरको पानीको भागलाई भेरी भन्ने गरिन्छ । भेरीको पानीको भाग बर्दिया आरक्षसंग जोडिए बग्दछ । भने पश्चिम तिरको पानीको भाग जस्लाई कर्णाली भन्ने गरिन्छ त्यो पानीले बर्र्दिया र कैलाली जिल्लाको सिमा कायम गरेको छ । कैलालीको चिसापानी व्यापारी केन्द्र पनि हो । चिसापानी पगेपछि पर्यटकको रोजाइ माछा चाखेर टीकापुर जाने हुन्छ । माछाको स्वादका पारखीका लागी चिसापानीमा माछाका परिकार बनाउने धेरै होटलहरु छन । कर्णाली चिसापानीको पुलमा फोटा नखिच्ने पर्यटक बिरलै हुन्छन । समूहमा बसबाट टिकापुर जाने पर्यटकहरुले पुलमा फोटा खिच्दाको दृष्य रमणिय हुन्छ । कतिपय पर्यटक चिसापानी देखि कर्णाली नदिबाट ¥याफटिङ गर्दै टीकापुर जान रुचाउछन । चिसापानीमा स्थानीय व्यवसायीले ¥याफटिङको सुविधा पनि दिने गर्दछन । चिसापानी–टीकापुर पार्कसम्म १६ किमिको दुरी कर्णालीमा ¥याफटिङ गर्दा चार घन्टा लाग्दछ ।
राजा महेन्द्र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा शिकार खेल्ने क्रममा मुटुको व्यथाले विमारी भए । चिकित्सकको सल्लाहमा उनी टीकापुर आराम गर्न पुगे । हावापानी राम्रो भएकाले राजा महेन्द्र २९ दिनसम्म टिकापुरमा आराम गरे । राजालाई आराम गर्नको लागी रातारात काठको घर बनाइयो । त्यही घर महेन्द्र आरोग्य गृह हो । राजा महेन्द्रले २०२७ सालमा २९ दिन कैलालीको टीकापुरबाटै राजकाज चलाएका थिए । पछि राजा वीरेन्द्रका लागी पनि वीरेन्द्र विश्राम बाटिका बन्यो । राजा महेन्द्र र रानी रत्नको चाहना अनुसार टिकापुरको विकासको काम खडगबहादुर सिंहले गरे । खडगबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा ०२८ सालमा टीकापुर विकास समिति गठन भयो । त्यपछि सरकारले टिकापुरको विकास गर्न ३ हजार एक सय ३३ बिघा वन क्षेत्रको जमिन विकास समितिलाई दियो । सरकारबाट प्राप्त वन जगंल फाँडेर टिकापुरमा पार्क बनाइयो । बाकी जमिनमा बस्ती विकास भयो ।
कैलालीको टिकापुर पार्क नेपालकै धरोहर हो । राजमार्गको लम्कीबाट १८ कि.मि.दक्षिणमा रहेको टिकापुर पार्क आजभोली पर्यटकहरुको गन्तब्य बनेको छ । समुद्रको सतह बाट १५२ मिटर अर्थात ४९८ फुटको उचाइमा रहेको टीकापुर नगरपालिका अहिले नारायणपुर र धन्सिहंपुर समेत समाहित भएर टिकापुरको भूगोल ठूलो भएको छ । टिकापुर र धनगढी गरेर दुई स्थानमा हवाइ मैदान छ । तर टिकापुरमा भने गित २२ बर्ष देखि हवाइसेवा बन्द छ । पहिला टिकापुरबाट अछाम, जुम्ला र काठमाण्डौ उडान हुदै आएको हवाइसेवा अहिले बन्द हुदा पर्यटकहरुलाई असुविधा भएको छ । तर टिकापुर पुग्नको लागी भने आजभोली विभिन्न रुडबाट सडक यातायात सन्चालनमा छन । टिकापुर जाने पर्यटकले आफुलाई सजिलो र नजिक पर्ने सडक मार्ग प्रयोग गर्न सक्दछन ।
टीकापुरको पुरानो नाम बङला हो । अहिले भने पुरानो नाम बङला सुन्नमा आउदैन । सबैको जनजिब्रोमा टिकापुर झुण्डिएको छ । टिकापुर पार्क नेपालकै सबै भन्दा ठूलो उद्यान हो । टिकापुर पार्क ८४ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो पार्कको डिजाइन आकर्षक छ । फुलको सिजनमा पार्क भित्र घुमघाम गर्न जाने पर्यटकहरु त्यहाको वातावरणबाट मोहित हुन्छन । पार्कको गेटबाट भित्र पस्नासाथ पर्यटकहरुको क्यामेराले फोटाहरु लिन भ्याइ नभ्याइ भएको हुन्छ । फूलैफूलको बगैंचा देखेर कतिपय पर्यटक जमिनमा लडिबुडि खेल्दै आनन्दमा रमाउने गर्दछन । टिकापुर पार्कमा थरिथरिका फूल देख्न पाइन्छ । पार्क भित्र रत्न र ऐश्वर्य बगैंचा पनि छ । बगैंचामा महेन्द्र आरोग्य गृह र वीरेन्द्र विश्राम बाटिका पनि रहेको छ । सिजनमा पार्कमा रंगविरंगका फूलहरुले सजिएको हुन्छ । टिकापुर पार्कमा गुलाब मात्रै दर्जनौ थरिका पाउन सकिन्छ । अन्य जातका फूलहरुले पनि पार्कलाई सजाएको छ ।
टीकापुर सुन्दर फूलबारी र घुम्न लायक गन्तव्य मानिन्छ । टिकापुरमा घुमघाम गर्ने धेरै स्थान छन । जुनकुरा त्यहा पुग्ने पर्यटकको समयमा भर पर्दछ । टीकापुरको पहिचान नै पार्क हो । पार्क बाहेक कर्णाली नदि, थारु बस्ती, बनाना रिसोर्ट, रानी महल, टाउन प्लानिङ आदि टिकापुरमा हेर्ने कुरा छन् । टिकापुरमा मोहना खोलामा डल्फिनले डुबुल्कि मारेको धेरै पर्यटकहरुले हेर्न मन गर्दछन । टिकापुर जाने पर्यटकले कैलाली जिल्लाको रानाथारु र देउडा सस्कृतीको बारेमा समेत अध्यन गर्न सक्दछन । कैलाली जिल्लामा यतिखेर ७ नम्वर प्रदेशमा पर्ने पहाडी जिल्लाका बासिन्दाहरुको बसोवास छ । सुदुर पश्चिमको भाषा, सस्कृतीका बारेमा पनि अध्यन गर्ने पर्यटकहरुका लागी नयाँ अनुभूति प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
दसै तिहार सकिना साथ टिकापुरमा पर्यटकहरुको घुइचो लाग्ने गर्दछ । समूहमा अवलोकनमा निस्कने देखि लिएर भनभोज र रमाइलोमा रम्न टिकापुर पुग्ने पर्यटकको सख्या यो समयमा दैनिक हजारौको हुन्छ । वनभोजको लागी आजभोली टिकापुर वरपरका मात्र होइन नेपालगन्ज, दाङ र अन्य छिमेकी जिल्लाबाट समेत टिकापुर पार्क पुग्ने गर्दछन । टाढाबाट टिकापुर पार्कमा वनभोज गर्न जादा पर्यटकहरुले कैलालीका अन्य स्थानका पर्यटकियस्थलको समेत अवलोकन गर्ने गरेका छन । टिकापुर पार्कले आजभोली आन्तरिक पर्यटकमात्र होइन भारतीयलाई पनि आकर्षण गर्न थालेको छ । टिकापुर देखि १६ किलोमिटरको दुरीमा भारतीय सीमा बजार तिकुनिया पर्दछ । नेपाल भारतवीचको व्यापारको लागि तिकुनिया, खक्रौला नाका १०० वर्षभन्दा पुरानो नाका मानिन्छ । मोहना नदिमा पुल बनेपछि भारतियहरुलाई टिकापुर आउन सजिलो भएको छ ।
अहिले पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत बर्दिया र कैलाली जोडने राजापुरस्थित सतिघाटमा पुल निर्माण भएको छ । बर्दिया सदरमुकाम गुलरियाबाट ३८ किलोमिटर पश्चिममा राजापुर र सतिघाट जोडने पुल पर्दछ । यो पुल सन्चालन भएपछि आजभोली धेरै पर्यटकहरु वर्दियाको ठाकुरद्वार भ्रमण गर्दै कोठियाघाट हुदै हुलाकी राजमार्गबाट पनि टिकापुर पुग्ने गरेका छन । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पाटे बाघजस्ता लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । ठाकुरद्वार वर्दिया जिल्लाको मात्र नभएर नेपालकै प्रमुख पर्यटकियस्थल हो । जहा बाघ, हात्ती, गैडा जस्ता जंगली जनावर सहज रुपमा पर्यटकले देख्न सक्दछन । निकुञ्ज वरिपरिको ३ सय वर्ग कि.मि.जमिन रहेको छ । विभिन्न प्रकारका जीव र वनस्पतिहरुले धनी छ वर्दिया निकुञ्ज । निकुञ्जमा २ सय भन्दा बढी प्रजातिका चराहरु र विभिन्न प्रकारका छेपारो, सर्प, माछा आदी पाइन्छ । निकुञ्जमा हात्ती चढने, चराचुरुङगी अवलोकन गर्ने, जंगल सफारीको आनन्द लिन सकिन्छ ।
टीकापुरमा बस्न खानको लागी धेरै होटल, रिसोर्ट र होमस्टे पनि सन्चालनमा छन । पर्यटकले गर्न सक्ने खर्चर चाहना अनुसार होटलको छनौट गर्न सकिन्छ । टिकापुरमा सिद्धार्थ, ग्रिन एसिया, खप्तड प्याराडाइज रिसोर्ट, माउन्ट एभरेस्ट, राज, भावना, एरोमा, सेन्थल पार्कलगायत होटलहरु छन । टिकापुरका ती होटलहरुमा ३ सय भन्दा बढी बेड छन् । होटल सिद्धार्थ टीकापुरको पहिलो पर्यटकीय होटल हो । टीकापुरमा अनौठो किसिमका रिसोर्ट देख्न सकिन्छ । झट्ट हेर्दा कृषि टुरिज्मको नुमना रिसोर्टको झल्को हुन्छ । केराको बारीमानै रिसोर्ट बनेको छ । टिकापुर पुगेपछि पर्यटकहरु बनानाज रिसोर्ट र होटलमा आँखा लगाउछन । बनानाज रिसोर्टमा केराको जरादेखि फूल सम्मका परिकार पाइन्छ । केराबाट बनेका निम्की, अचार, तरकारी, फिंगरचिप्स, पकौडा, मम, खीर, चिप्स,ब्रान्डीदेखि वाइनसम्म तीन दर्जन परिकारको स्वाद पर्यटकहरुले लिन पाउछन ।
टीकापुर क्षेत्रमा अर्को रिसोर्ट रानीमहल पनि छ । रानी पदमकुमारीले ११९ वर्ष अघि खनाएको रानी कुलो अहिले सामुदायिक भएको छ । उनको दरबारको भग्नावशेष फेला पारेपछि त्यहाँ अहिले रानीमहल रिसोर्ट सन्चालनमा छ । टीकापुर बसपार्कदेखि पाँच किलोमिटर दुरीमा छ रानीमहल । त्यहाँ दालभातदेखि केराका थरिथरि परिकार पाइन्छ । स्वादिलो केराका परिकार अचार, पकौडाका स्वाद लिदा पर्यटक रमाउने गर्दछन । टिकापुरमा पर्यटकहरुले होमस्टेमा पनि रमाउन सक्दछन । टिकापुर पार्क नजिकै नोक्लीपुरमा थारु समुदायबाट संन्चालन गरिएको होमस्टे छ । होमस्टेमा थारु सस्कृतीमा परमपरागत खादै आएका घोंघी, बरिया, फुलौरी, खेर्या, बंगुर तथा मुसाको मासु, ढिक्रि, सिध्रा, आलुको अचार, अण्डीको विभिन्न स्वादका भात,जाडको झोल,महुवाको रक्सी लगायतका परिकार आफ्नो चाहना अनुसार पर्यटकले खान पाउछन ।
आजभोली काठमाण्डौ देखि टिकापुर यात्रामा निस्कने कतिपय पर्यटक काठमाण्डौ–नेपालगन्ज हवाइमार्ग अथवा बसबाट नेपालगन्ज आउने गर्दछन । नेपालगन्जबाट वर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया हुदै हुलाकी मार्गबाट पनि टिकापुर पुग्ने गर्दछन । यो मार्गमा यात्रा गर्ने पर्यटकहरुले भेरी र कर्णाली नदिले वर्दियामा बनाएको ठूलो टापु भित्रका ग्रामीण बस्ती र पुरानो ब्यापारी केन्द्र राजापुर समेतको अवलोकन गर्न सक्नेछन ।
काठमाडौं–टीकापुर ६९० कि.मी. । काठमाडौंबाट टीकापुरसम्म बस सेवा छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लम्कीबाट १८ किमिमा टीकापुर पार्क । काठमाडौं–धनगढी हवाइ उडान १ घन्टा । धनगढी फुलवारी, हसुलिया, लालभुजी हुलाकी मार्ग भएर पनि टिकापुर पुग्न सकिन्छ । यो मार्गमा यात्रा गर्दा ६६ कि.मी दुरी पार गर्नु पर्दछ । धनगढीबाट अत्तरिया लम्की भएर टिकापुर पार्क पुग्न ९८ कि.मी. यात्रा गर्न पर्दछ । नेपालगन्ज देखि सिधा बससेवा सन्चालन छ । कर्णाली पुल देखि टिकापुर २८ कि.मी. पर्दछ ।
मितिः – २०७४ कार्तिक १२ गते दाङ
← घोडाघोडी ताल पर्यटनको गन्तब्य
महमा औषधीको गुण हुन्छ →